Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): ဗမာတပ်၏ လမ်းပိတ်မှု ကြောင့် ကချင်ပြည်နယ် အနောက် ဘက်ခြမ်းရှိ ရွာသားများ အစားသောက်နှင့် ဆေးဝါး ပြတ်လပ်
ဗမာတပ်၏ လမ်းပိတ်မှု ကြောင့် ကချင်ပြည်နယ် အနောက် ဘက်ခြမ်းရှိ ရွာသားများ အစားသောက်နှင့် ဆေးဝါး ပြတ်လပ်
DAP BA (2) GINRA LAIWA LAISA LAM HPE...
DAP BA (2) GINRA LAIWA LAISA LAM HPE
MYEN HPYEN DAP NI PAT SHINGDANG AI
MAJAW MUNG MASHA NI GRAI JAMJAU WA .
KIO, အနောက် ပိုင်းတိုင်း ဒေသ၊ KIA, တပ်မဟာ (၂)အုပ်ချုပ်မှု ဒေသ ဖြစ်သော
ကချင် ပြည်နယ် အနောက် ဘက် ခြမ်း တနိုင်းဘက် ရှိ အောင်လော့ ကျေးရွာ ဒေသ
ရှိ ဒေသခံ ပြည်သူများအား မြန်မာ စစ်တပ် မှ ဖြတ်လေး ဖြတ် စနစ် ဖြင့် ပိတ်ပင်ထား သည် မှာ (၃) လ ကျော် ရှိသွား ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
မြစ်ကြီးနား -တနိုင်း ကားလမ်း အပိုင်း တနိုင်းမြို့ မရောက်ခင် (၅) မိုင် အလိုရှိ အောင်စိုးမိုးရွာ ၌ လာရောက် စခန်း ချ နေသော မြန်မာ စစ်တပ် (ခ.မ.ရ-၃၁၈)
မှ ဗိုလ်ဝိုင်းဇင်ဦး ဦးဆောင် သော စစ်တပ် သည် အောင်လော့ရွာ သားများ ၏
အ၀င်အထွက်များ အား စစ် ကြောင်း ဖြင့် အချိန်ပြည့် စောင့် ကြည့် နေ ပြီး
ရွာသားများ မှ မိမိတို့၏တောင်ယာသို့ သွားရာတွင် လည်း ၄င်း စစ်တပ်များမှ
အကြောင်းမဲ့ ဖမ်းဆီး နှိပ်စက် စစ်ဆေး မှုများ ပြုလုပ်နေ ခြင်း၊ နှင့် ဖျားနာ နေ သော
လူနာများအား ရွာအပြင်သို့ ဆေးရုံ၊ ဆေးပေးခန်းသို့ သွားရောက် ဆေးကုသမှု
သွားရန် အတွက် လည်း၎င်း စစ်တပ်မှ ခွင့် မပြုခြင်းတို့ ကြောင့် ဒေသခံ ရွာသားများ
အကြီး အကျယ် ဒုက္ခရောက်နေ ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ဤကဲ့သို့ အောင်လော့ ရွာ သားများအား မြန်မာ စစ်တပ်မှ ပိတ်ဆို့ ထားခြင်း ကြောင့်
ယခု အခါ ၄င်းရွာသားများ အတွက် စားဝတ်နေရေး နှင့် ကျန်းမာရေး အတွက်ဆေးဝါး
များ ပြတ်လပ်နေ ပြီ ဖြစ် ခြင်းကြောင့် ဒေသခံများ ၏ ကျန်းမာရေး နှင့် စားသောက်ရေး အတွက် အထူးပင်ဆိုးရိမ်နေ ရကြောင်း ဒေသံများထံ မှ သတင်းရရှိပါသည်။
စစ်တပ် မှ ၄င်းရွာသားများအား ဆန် (၄)ပြည် သာ ခွင့် ပြုထားပြီး အခြားမည်သည့် ဆေးဝါး၊ စက်သုံးဆီး နှင့် အခြား မည်သည့် ပစ္စည်း မှသယ်ဆောင်ခွင့် မပြု ကြောင်းလည်း ထပ်မံသိရှိရပါသည်။
၄င်းမြန်မာ စစ်တပ်မှ ဒေသခံ ရွာသားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ပစ္စည်းများအား အကြောင်းမဲ့ လိုက်လံ သိမ်းဆီးနေ ကြောင်း ယခုအခါ ၄င်းတို့ ၏ စစ်တပ် စခန်း၌ ဒေသခံရွာသား များ
၏ ပစ္စည်း အများအပြား နှင့် ဆိုင် ကယ် အစီးပေါင်း (၃၀)ကျော် အား အကြောင်းမဲ့ သိမ်းဆည်း ထားကြောင်း ကို လည်း သိရှိရပါသည်။
ယခုလ ဒီဇင်ဘာလ (၄)ရက်နေ့ ၌ မြစ်ကြီးနား (KBC ) မှ အသင်းတော်လူကြီး နျင့် ဆရာ အချို့ သည် မိမိတို့ ၏ ဘာသာ ရေး ကိစ္စအတွက် အောင်လော့ ရွာ သို့ သွားရာတွင် လည်း ၄င်း စစ်တပ်မှ တားမြစ်ခြင်းခံရပြီး ဆရာများမှ ၄င်းစစ်တပ် အားတားဆီးရခြင်း အကြောင်းအား မေး မြန်းရာ သက်ဆိုင်ရ အရာရှိ မှ အထက် အမိန့် အရ ဆောင်ရွက်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်း ကြောင့် အသင်းတော် လူကြီးများမှ (PCG )မှ တဆင့် မပခ တိုင်မှုးထံ မှ ခွင့် ပြု ချက်ဖြင့် မနည်း လွတ်လာ ကြောင်း ကို လည်း သိရှိရပါသည်။
ယခု လို မြန်မာ စစ်တပ်မှ ပိတ်ဆို့ ထားသောေးသတွင် ဒေသခံ ပြည်သူ (၁၀.၀၀၀)
ကျော်နေထိုင်လျှက်ရှိပြီး စစ်တပ်၏ဤသို့ ပိတ်ဆို့ မှုကြောင့် ယခု အခါ ၄င်းဒေသ၏
ကုန်ဈေးနုန်းမှာ အဆမတန်ကြီးမြင့်နေပြီး ဒေသခံ ပြညသူများ အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်နေ ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
(၁)ဆန် တပြည် (အညံ့စား) -၃၀၀၀ ကျပ်၊ ဒီဇယ် (၁)ဂါလံ -၇၀၀၀ ကျပ် ၊ ဓါတ်ဆီ -၈၀၀၀ကျပ် တို့ ဖြစ် ကြောင်း ကိုလည်း ဒေသခံများထံမှ ထပ်မံ သိရှိရပါသည်။
စစ်တပ်မှ ပြည်သူများအား ယခု လို ပိတ်ဆို့ ဖြတ်လေး ဖြတ်ဖြတ်ထားသော် လည်း ၄င်း တို့ စစ်တပ် အတွက် မှာ မှု (၄.၁၂.၂၀၁၄) ရက်နေ့၌ စစ်ကားကြီး (၄၈) စီး ဖြင့် တနိုင်း စစ်တပ်သို့ ရိက္ခာများ လက်နက် ခဲယမ်း များ လာရောက်ပို့ ပေးခဲ့ ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Sinna Ginwang Ginjaw, Dap ba (2) ginra, Awng Lawt de laisa laiwa lam hpe Myen hpyen dap ni pat shingdang da ai shata (3) du wa sai majaw dai ginra hta nga ai mung mare masha ni lusha hte tsi mawan grai yak hkak wa nga ai lam na chye lu ai.
Myitkyina – Danai mawdaw lam, danai du na deng (5) ra ai Awng Soe Moe mare kaw dap jung nga ai hk.m.y ( 318 ) kaw na Du Wai Zin Oo woi awn ai dap ni gaw Awng Lawt de pru wa shang wa ai lam ni hpe aten tup ten yu da nna pat shingdang ai lam, rim ai lam ni galaw nga ai lam, dai gate hte mu mada ai shara hkan nga ai nta masha ni hte yi sa ,yi wa ni hpe atsawm jep nna lai shangun tim, n gu bye4hta jan nna kaga tsi mawan lusha hte jak sau ni hpa mung n shalai ai lam, machyi makaw hkrum ai majaw Danai tsirung sa wea ai ni, Ma ni hpe hkamja lam makawp maga tsi sa htu ai lam, jawng hte seng nna lai hkawm sa mung nmai hkra pat da ma ai majaw Awng Lawt Ginra na lusha hte tsi mawan taw mat wa nna machyi masha grai law wa nga ai lam chye lu ai.
Nhkawm sa nmai ai lam niamajaw Lagu lagyim ai hte mayun lam hku lai hkawm ai ni hpe mung ma sha hking hte sinat kadun makoi gun nna hkap nga ai Myen hpyenla ni hpyen dap de rim mat wa nna gumhpraw, Arung arai, cycle yawng zing la kau ya ma ai lam, ya ten hpyendap wang kaw cycle 30 jan hte arung arai ni rim da ma ai lam matut chye lu ai.
December4ya shani Awng Lawt de hpung kawan lung ai KBC hte Myitkyina Ginwang sara ni hpe mung hkap pat shingdang da hkrum ai majaw san yu yang” Myen hpyendap ginjaw matsun re lam “ tsun nna n shalai ai lam, Hpung sara ni hku nna PCG salang ni hpe garum hpyi let Taing Mhu hte matut mahkai ya ai majaw tsam mari lu lai wa ma ai lam mung chye lu ga ai.
Ya ten hta Dap ba (2) ginra rai nga ai Awng Lawt, Zupmai, Nawng Nyeng, Kapdup maw ginra ni hta mungshawa ( 10000 ) jan nga ai rai nna n gu bye mi 3000 jan, Diesel galon mi 7000, Datsi galon mi 8000 jan du mat ai hte tsi mawan lusha ni grai taw mat wa nga ai lam chye lu ai.
Myen hpyendap ni hku nna KIO/KIA ginra ni de tang du hkra pat shachyat da ai lam lu galaw ma ai raitim December4ya shani myen hpyendaparation hte laknak htaw ai hpyen mawdaw kaba ( 48 )gaw Danai de angwi apyaw sha htaw lahka, jahting la nga ma ai lam Buga masha ni hku nna chye lu ai.
(ဓါတ်ပုံ- တနိုင်းမြို့ အ၀င်တွင် ခရီးသွားပြည်သူများထံမှ မတရား စစ်တပ်၏ ငွေကောက်ဂိတ် နှင့် ၄င်းတို့ ၏စစ်တပ်။)